Source – http://www.pnsjapan.org/
More pics – http://picasaweb.google.com/t2sumleo/BoycottNov7ShamElection#
More pics – http://picasaweb.google.com/maikyawoo/ZawzawAung033?feat=flashalbum#
Filed under ကော်မတီ လုပ်ငန်းစဉ်များ Tagged with Mai Kyaw Oo
ဒီမိုကရေစီ သင်ခန်းစာများ (Lessons in Democracy) ဘာသာပြန်မှ ထုတ်နှုတ်ဖော်ပြပါသည်။ အာဏာရှင်စနစ်အောက်မှ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကျင်းပတော့မည့် ၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဒီမိုကရေစီ စံနှုန်းများဖြင့် မည်သို့မည်ပုံ ကွာခြားနေသည်ကို ဗဟုသုတ အလို့ငှာ၊ နိုင်ငံရေး အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမည့် လှုပ်ရှားမှု အလို့ငှာ ပြန်လည်ဖော်ပြလိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာဘာသာပြန်သူ – လွင်အောင်စိုး
အပိုင်း (၁၅) ရွေးကောက်ပွဲများ
ကိုယ်စားပြု ဒီမိုကရေစီစနစ် (Representative Democracy) ဟာ ရွေးကောက်ပွဲတွေအပေါ် အခြေခံရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရွေးကောက်ပွဲတွေဟာ လွတ်လပ်ရပါမယ်၊ သမာသမတ် ရှိရပါမယ်။ လွတ်လပ်ပြီး သမာသမတ်ရှိတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲမျိုး ဖြစ်အောင် လုပ်နိုင်မယ့် အခြေခံအချက်တွေလည်း ရှိနေရပါမယ်။ ဒါတွေအပြင် လက်ရှိ အစိုးရ ကိုယ်တိုင်က အစိုးရအရာရှိတွေအတွက် ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပပေးတတ်တယ် ဆိုတဲ့အချက်ကိုလည်း ပိုပြီး အလေးအနက် ဂရုစိုက်ဖို့လိုပါတယ်။ ဆိုလိုတာက လက်ရှိအစိုးရ အရာရှိကြီးတွေက သူတို့ရာထူးဆက်မြဲဖို့၊ တနည်းအားဖြင့်ဆိုရင် သူတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးပါတီက အာဏာဆက်ရနေဖို့ ရွေးကောက်ပွဲ တွေကို ထိန်းချုပ်လွှမ်းမိုးနိုင်ဖို့ ကြိုးပမ်းလေ့ရှိကြပါတယ်။
အဲဒီလိုလုပ်လာနိုင်ဖို့ ရှိနေတာတွေအားလုံးကို တားဆီးပိတ်ပင်ရပါမယ်။ အစိုးရဝန်ထမ်းတွေကို နောက်ထပ် အာဏာကန့်သတ် ထိန်းချုပ်တဲ့ နည်းလမ်းနဲ့ တားဆီးပိတ်ပင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ ဗဟို အစိုးရဝန်ထမ်းတွေက ရွေးကောက်ပွဲ လှုပ်ရှားမှုမှာ မပါဝင်ရအောင် တားမြစ်ထားရတာကို နမူနာယူကြည့်နိုင်ပါတယ်။
ရွေးကောက်ပွဲတွေက နိုင်ငံသားတွေရဲ့ ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒကို ရှင်းလင်းသဲကွဲအောင် ဖော်ပြပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှု တွေက အမှန်တကယ် လွတ်လပ်ပြီး သမာသမတ်ရှိတယ်ဆိုရင် နိုင်ငံသားတွေရဲ့ဆန္ဒကို ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ စည်းစနစ်ကျနအောင် အကောင်အထည် ဖော်ပေးနိုင်ပါတယ်။
နိုင်ငံသားတွေမှာ နိုင်ငံရေးလုပ်ပိုင်ခွင့်တွေ ရှိပါတယ်။ မဲပေးနိုင်ခွင့် (ဒါမှမဟုတ်) ကိုယ်တိုင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင် အရွေးခံနိုင်ခွင့် ရှိပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်မပြိုင်ဘူးဆိုရင် ရွေးကောက်ပွဲတာဝန်တွေကို ယူနိုင်ခွင့် ရှိပါတယ်။ မဲပေးသူနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ပြိုင်သူ တွေဟာ နိုင်ငံတော်က အကာအကွယ် ပေးတာကို ရယူပိုင်ခွင့် ရှိပါတယ်။ နိုင်ငံတော်ကပေးတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေကို လက်ခံရယူခွင့် ရှိပါတယ်။ နစ်နာဆုံးရှုံးတာတွေအတွက် နိုင်ငံတော်ကို တရားဝင်တိုင်တန်းခွင့် ရှိပါတယ်။
နိုင်ငံသားဖြစ်တယ် ဆိုတဲ့အချက်က တန်းတူညီမျှတဲ့သဘောကို ဆောင်ပါတယ်။ လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ နိုင်ငံရေးစနစ်တခုခုမှာ တန်းတူ ညီတူ ပါဝင်နိုင်ခွင့်ရှိတာကို ဖော်ပြပါတယ်။ ဥပမာ- နိုင်ငံရေးပါတီကို ထူထောင်နိုင်ပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင် အရွေးခံနိုင်ပါတယ်။
ရွေးကောက်ပွဲ ဆိုတာက နိုင်ငံရေးမှာ တရားဝင် ပါဝင်နိုင်ခွင့်ရှိတဲ့သဘောကို ဆောင်ပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲတွေကို သမားရိုးကျ အတိုင်း ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း လုပ်ဆောင်ရပါတယ်။ လျှို့ဝှက်လုပ်ဆောင်လို့ မရပါဘူး။ စည်းစနစ်ကျနရပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲဟာ သဘောမတူ ဆန့်ကျင်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ပုန်ကန်ထကြွတာလည်း မဟုတ်ပါဘူး။
အစိုးရအတော်များများက နိုင်ငံသားတချို့ကို မဲမပေးနိုင်အောင်၊ ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်မပြိုင်နိုင်အောင် နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ကန့်သတ် တားမြစ်လေ့ရှိပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲမှာ သူတို့မလိုလားတဲ့ အချို့အဖွဲ့တွေက အနိုင်ရရှိသွားမှာကို မလိုလားလို့ နိုင်ငံရေးအရ စိန်ခေါ် ယှဉ်ပြိုင်လာတာတွေကို အစိုးရတွေက တားဆီးလေ့ရှိတာဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာသာရေးနဲ့ လူမျိုးစုရေးရာကို အကြောင်းပြုပြီး နိုင်ငံရေးမလုပ်ဖို့လည်း ကမ္ဘာတလွှား အစိုးရတွေက ကန့်သတ်ထားတတ်ပါတယ်။
လူအချို့ကို ပုံမှန်လည်ပတ်နေတဲ့ လူ့အသိုင်းအဝိုင်းကနေ ခဏဖြစ်ဖြစ် ဖယ်ရှားထားရတဲ့ မူတခု ရှိပါတယ်။ ဥပမာ- ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ရာဇဝတ်မှု ကျူးလွန်ထားသူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး ဖယ်ရှားခံနေရသူတွေဟာ မဲပေးခွင့် မရပါဘူး။ အစိုးရက ကန့်သတ်ထားရပါ တယ်။ မဲပေးနိုင်တဲ့ အနိမ့်ဆုံးအသက်ကို သတ်မှတ်ပြီး ကန့်သတ်ရပါတယ်။ အသက် (၁၈)နှစ်ပြည့်သူကို အနိမ့်ဆုံးအသက် ဖြစ်တယ်လို့ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအများစုက အများအားဖြင့် သတ်မှတ်တတ်ကြပါတယ်။ အမှန်တကယ် မဲပေးခွင့် ရှိရုံနဲ့ မဲပေးနိုင်တယ်လို့ အပြတ်မပြောနိုင်ပါဘူး။ ဥပမာ- မဲပေးခွင့်ရှိတဲ့ နိုင်ငံသားတဦး ဖြစ်ပေမယ့်လည်း မဲပေးဖို့ မှတ်ပုံတင်ချိန်မှာ စိတ်ဖောက်ပြန် ရူးသွပ်နေ တယ်လို့ ဆေးစစ်ခံရရင် မဲပေးနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ဒီမိုကရေစီကို ကျင့်သုံးတယ်ဆိုရင် ဒီမိုကရေစီအရေး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေ၊ မဲပေးသူတွေ ဖြစ်နိုင်သမျှ အများဆုံး ရှိနေစေရ ပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီစနစ်မှာ ထိထိရောက်ရောက်နဲ့ အကောင်းဆုံးဖြစ်စေဖို့ မဲပေးသူတွေမှာ လိုအပ်တာတွေကို ပြောပါမယ်။
1. ပညာရေးအခြေခံနဲ့ အထွေထွေဗဟုသုတရှိရပါမယ်။ တဆက်တည်းမှာဘဲ လူ့ဘဝမှာ ကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့ အရှုပ်အထွေးတွေကို နားလည်နိုင်စွမ်းရှိနေပြီး လူမှုအသင်းအဖွဲ့တွေမှာ သင့်တင့်လျောက်ပတ်စွာ၊ တရားမျှတစွာ၊ ကျင့်ဝတ်ညီစွာ ပါဝင်နိုင်စွမ်း ရှိနေ ရပါမယ်။
2. လူမှုရေးမှာ မလိုလားအပ်တာတွေက သြဇာလွှမ်းမိုးတတ်လို့ အဲဒါတွေကို ဖယ်ရှားနိုင်ရပါမယ်။ လူမှုရေးထိခိုက်မှာကို ငဲ့ကွက်ပြီး အားနာနေလို့ မရပါဘူး။
3. အစိုးရက ဘာတွေ ရည်ရွယ်ထားသလဲ ဆိုတာ သိရမယ့်အပြင် အဖွဲ့အစည်းဌာနတွေ၊ ဘယ်လို စီမံ လုပ်ဆောင်နေကြသလဲ ဆိုတာတွေကိုလည်း သိထားရပါမယ်။
4. အစိုးရ ထုတ်ပြန်ချက်တွေထဲမှာ လောလောဆယ် အရေးကြီးနေတာတွေကို သိထားရပါမယ်။
5. မဲပေးသူရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာ၊ အင်္ဂါရပ်တွေနဲ့တကွ ဘယ်လိုတာဝန်ရှိနေတယ် ဆိုတာကို သိထားရင်း စည်းစနစ်ကျန လွတ်လပ်စွာ မဲပေးနိုင်ရပါမယ်။
အမှန်တကယ်မှာတော့ ဘယ်လိုလူ့အဖွဲ့အစည်းမဆို ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကို ဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်လောက်တဲ့ မဲပေးသူတိုင်းမှာ အခု ပြောတဲ့ လိုအပ်ချက်အားလုံးကို အဆင့်မီမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဆိုရင် ဘာလုပ်ပေးသင့်သလဲလို့ မေးစရာဖြစ်လာပါတယ်။ အဆင့် မမီရုံနဲ့ မဲမပေးနိုင်တော့ဘူးလို့ မဆိုလိုပါဘူး။ မဲပေးနိုင်ခွင့်ကို အဆုံးရှုံးခံလို့တော့ မရပါဘူး။ ဒ့ါပြင် အဆင့်မီ-မမီဆိုတာကို ယုတ္တိရှိရှိ၊ မျှမျှတတ ဘယ်လိုတိုင်းတာမလဲ။ ဒါမျိုးတွေကို တခါမှလည်း မစဉ်းစားမိခဲ့ပါဘူး။
လုပ်ပေးနိုင်တာ တခုဘဲ ရှိပါတယ်။ အဲဒါကတော့ “လူထုပညာပေးရေး” ပါဘဲ။ လူထုပညာပေးရေးပုံစံနဲ့ မဲပေးရမယ့်သူတွေကို ရွေးကောက်ပွဲမှာ လိုအပ်တဲ့ ဗဟုသုတတွေကို ဝေမျှပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ မဲပေးတဲ့ကိစ္စအပြင် ဆက်နွယ်နေတဲ့ အခြားကိစ္စတွေအပေါ် လူထုက စိတ်ဝင်စားတဲ့အဆင့်၊ နားလည်သဘောပေါက်တဲ့အဆင့်၊ ပါဝင် လုပ်ဆောင်လာတဲ့အဆင့်ဆိုပြီး ရှိတာဖြစ်လို့ အချိန်ယူပြီး အသိပညာပေးရပါလိမ့်မယ်။
နိုင်ငံရေးကို တရားဝင် ဦးဆောင်နိုင်ဖို့အတွက် ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်ပြိုင်ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲနိုင်တဲ့အခါ နိုင်ငံကထောက်ပံ့ ထားတဲ့ ရုံးခန်း၊ လွှတ်တော် အစရှိတာတွေ သုံးပြီး အစိုးရရဲ့စီမံခန့်ခွဲရေး၊ ဥပဒေပြုရေးတွေကို လူသိရှင်ကြား လုပ်ရပါတယ်။
နိုင်ငံအဆင့်အနေနဲ့ အထူးအရေးကြီးတဲ့ မလုပ်မဖြစ် ဂရုစိုက်စရာကိစ္စတွေအပေါ် လူထုက လက်ခံကျင့်သုံးလိုသလား ဆိုတာကို အစိုးရတွေက သိဖို့လိုပါတယ်။ ဒီအခါ လူထုဆန္ဒ ခံယူပွဲကို ကျင်းပပေးရပါတယ်။ နိုင်ငံသားတွေက မဲပေးပြီး သူတို့ဆန္ဒကို ထုတ်ဖော်ကြပါတယ်။ လူထုဆန္ဒခံယူပွဲဟာ ပုံမှန်ရွေးကောက်ပွဲတွေနဲ့ တပြိုင်တည်းကျင်းပတာလည်း ရှိတတ်ပါတယ်။ သီးခြားစီ ကျင်းပတာ လည်း ရှိပါတယ်။
ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရသူတွေက ရာထူးသက်တမ်းတခုအတွင်းမှာ နိုင်ငံရေးကို ဦးဆောင်လုပ်ကိုင်ပေးရပါတယ်။ ပုံမှန်ရာထူး သက်တမ်းဟာ ၄ နှစ် (ဒါမှမဟုတ်) ၅ နှစ် ကြာပါတယ်။ ယေဘူယျအားဖြင့် ရာထူးသက်တမ်း ပိုပြီးတိုရင် အကောင်းဆုံးပါဘဲ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ရာထူးလက်ကိုင်ရှိသူကို ရာထူးသက်တမ်းအတွင်းမှာ ဖယ်ရှားဖို့ ခက်တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
နိုင်ငံရေးဦးဆောင်သူတယောက်က ဦးဆောင်နိုင်စွမ်း ညံ့ဖျင်းနေတတ်တာဟာ မဆန်းပါဘူး။ ဒီခေတ်မှာ ပိုပြီးတောင် တွေ့မြင်နေကြရပါတယ်။ အရည်အချင်းညံ့ဖျင်းတဲ့ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ကို နောက်ထပ်သက်တမ်းတခုအတွက် ဆက်လက် မရွေးချယ်မိဖို့ လိုပါတယ်။ အရည်အချင်းညံ့ဖျင်းတဲ့သူက နိုင်ငံရေးဦးဆောင်ကဏ္ဍမှာ ပါဝင်လာမှာကို တားဆီးနိုင်ဖို့ အာဏာကန့်သတ်ထားရပါတယ်။ မဲပေးမယ့် လူထုကလည်း ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း အဆင့်မီမီ မဲပေးရွေးချယ်နိုင်ဖို့ လိုပါတယ်။
သမတဦးဆောင်တဲ့ ဒီမိုကရေစီစနစ်မှာ သမတနဲ့တကွ အခြား ဥပဒေပြုအမတ်တွေအတွက် သူတို့ ရာထူးသက်တမ်း ကုန်ချိန်လောက်မှာ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပပါတယ်။ ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီစနစ်မှာလည်း ဒီအတိုင်းဘဲရှိပေမယ့် ကွာခြားသွားတာကတော့ နိုင်ငံရေးအခြေအနေတချို့မှာ ဝန်ကြီးချုပ် ဖြစ်သူဟာ ရွေးကောက်ပွဲကို ပုံမှန်သက်တမ်းထက် စောပြီး ခေါ်ယူကျင်းပနိုင်ခွင့် ရှိတာဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲကို သက်တမ်းစောပြီး ကျင်းပတာကြောင့် ဒီမိုကရေစီ နည်းလမ်းမကျပဲ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီလိုလုပ်တာဟာ ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့တကွ သူ့ရဲ့ အာဏာရနိုင်ငံရေးပါတီအနေနဲ့ အခွင့်သာအောင် ဖန်တီးပေးတာဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီစနစ်မှာ ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရတဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီက အစိုးရဖွဲ့ခွင့် ရပါတယ်။ အစိုးရဖြစ်လာပေမယ့်လည်း အစိုးရရဲ့ အရည်အချင်း ညံ့ဖျင်းရင် အစိုးရအပေါ် အယုံအကြည် မရှိကြောင်း အဆိုတင်သွင်းပြီး မဲခွဲဆုံးဖြတ်ရတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တခု (No confidence vote) ရှိပါတယ်။ ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံထားရသူတွေကို ရာထူးသက်တမ်း မကုန်မီမှာတောင် ဖယ်ရှားနိုင်ဖို့ စီမံထား တာပါ။ တကယ်လို့ အယုံအကြည်မရှိ မဲခွဲရာမှာ အစိုးရဘက်ကနိုင်သွားရင် ရွေးကောက်ပွဲကို စောပြီး ကျင်းပပါတော့တယ်။ အတိုက်အခံဘက်မှာ နိုင်ခြေမရှိတော့လို့ အာဏာရပါတီဟာ နောက်ထပ်သက်တမ်းတခုကို စိတ်ချလက်ချ စတင်နိုင်လို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်ပြိုင်နိုင်တဲ့ အရည်အချင်းတွေဟာ အများအားဖြင့် အသက်၊ နိုင်ငံတွင်း နေထိုင်မှုအဆင့်၊ နိုင်ငံသားဖြစ်တဲ့ အချိန် ကာလတို့နဲ့ ပတ်သက်ပါတယ်။ ဒီထက်ပိုပြီး အရည်အချင်းပြည့်မီဖို့ မလိုအပ်တော့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် နိုင်ငံအချို့မှာတော့ နောက်ထပ် ကန့်သတ်ထားတာတွေ ရှိတတ်ပါတယ်။ ဥပမာ-တက္ကသိုလ်ပညာရေး ရှိရမယ် စတဲ့ ကန့်သတ်ချက်တွေမျိုးပါ။ ဒီလို ကန့်သတ်ချက်မျိုး ရှိတယ်ဆိုရင် အဲဒီနိုင်ငံတွေမှာ ရွေးကောက်ပွဲဝင်မယ့်သူတွေဟာ ပိုက်ဆံရှိ ပညာတတ် ဖြစ်နေရပါတော့မယ်။ ဒါဆိုရင် ဆင်းရဲ နွမ်းပါးလို့ အထက်တန်းပညာ မသင်နိုင်ခဲ့ရသူတွေအတွက် နိုင်ငံရေးမှာ နေရာမရှိတော့သလို ဖြစ်နေပါတော့တယ်။ ဒါဟာ ငွေကြေး ဓနကို အမွေဆက်ခံပြီး နိုင်ငံရေးအမြတ်ထုတ်တာပါဘဲ။ လူအားလုံး တန်းတူညီတူဖြစ်ရမယ့် ဒီမိုကရေစီကျင့်စဉ်နဲ့ လုံးဝဆန့်ကျင် နေပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီကို အစစ်အမှန်ကျင့်သုံးရင် ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်မယ့်သူဟာ နိုင်ငံရေး အရည်အသွေး ရှိနေတဲ့အပေါ်မှာဘဲ မူတည်သင့်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီမိုကရေစီကို အစစ်အမှန် ဖြစ်ထွန်းစေလိုရင် ဘယ်သူမဆို ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်နိုင်ခွင့် ရှိနေရပါမယ်။
ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံမှာ မဲပေးသူတို့တွေဟာ စိတ်ကြိုက်မဲပေး ရွေးချယ်နိုင်ခွင့် ရပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်နေအောင်လည်း မဲရုံတွေမှာ မဲပုံးပုံစံ၊ အထားအသိုကအစ အစစအရာရာ စီစဉ်ကာကွယ်ပေးထားရပါတယ်။ မဲပေးသူတွေကို ခြိမ်းခြောက်သွေးဆောင်ပြီး ရွေးချယ် မဲထည့် ခိုင်းတာမျိုး မရှိစေရပါဘူး။ လိုအပ်တဲ့အခါ မဲရုံတွေမှာ လက်နက်ကိုင်အစောင့်တွေကို ချထားပေးရပါတယ်။ International Monitor လို့ခေါ်တဲ့ နိုင်ငံတကာ မဲရုံစောင့်ကြည့်သူတွေကိုလည်း နေရာချထားပေးရပါတယ်။
မဲအနိုင်အရှုံးစာရင်း အတိအကျရဖို့ အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ မဲရုံတွေမှာ မမှန်မကန် စာရင်းသွင်းပြီး လူစားထိုး မဲပေးခိုင်းတတ် ကြပါတယ်။ ပြီးတော့ မဲခိုး၊ မဲလိမ်၊ မဲဖျောက် စတဲ့ မသမာမှုတွေ မရှိရအောင် ကာကွယ်ပေးဖို့ ကြိုတင်စီစဉ်ရပါတယ်။ မဲပေးမယ့်သူ စာရင်းကို အမှန်ဆုံးဖြစ်အောင် အတည်ပြုထားရပါတယ်။ မဲပေးမယ့်သူတွေအတွက် သက်သေခံ အထောက်အထားတွေကိုလည်း စနစ်တကျ ဖြစ်စေရပါတယ်။ အသက်ကြီးသူ၊ စာသိပ်မတတ်သူတွေလိုမျိုး မဲပေးသူတွေဟာ ရှုပ်ထွေးတဲ့ မဲပေးစနစ်ကို သိပ် နားမလည်ကြလို့ သူတို့ကို မသမာသူတွေက ခြိမ်းခြောက်သွေးဆောင်ပြီး မဲထည့်ခိုင်းတတ်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် မဲပေးတဲ့ပုံစံဟာ အတတ်နိုင်ဆုံး လွယ်ကူရှင်းလင်းနေရပါမယ်။
ကိုယ်စားပြုဒီမိုကရေစီစနစ်မှာ မဲပေးသူတွေဟာ သူတို့သိပြီးသားသူတွေကို ရွေးချယ်နိုင်ကြပါတယ်။ ရွေးချယ်မှာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မဲပေးဖို့ အကြုံးဝင်သူမှန်သမျှ မဲပေးခွင့်ရပါတယ်။ မဲရုံကြီးကြပ်သူတွေဟာ ဆန္ဒမဲတွေကို မှန်မှန်ကန်ကန် စာရင်းသွင်းပြီး အမှားအယွင်းမရှိ ရေတွက်ရပါတယ်။ မဲရေတွက်ရာမှာ လူကိုယ်တိုင် ရေတွက်ရပါတယ်။ တိုးတက်ခေတ်မီလာတဲ့အခါမှာတော့ ခေတ်ပေါ် ကိရိယာအသစ်တွေ၊ နည်းပညာသစ်တွေကိုသုံးပြီး မဲပေးလာကြပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် မသမာမှု မရှိစေဖို့၊ စက်အမှား -လူအမှား မရှိစေဖို့ အတတ်နိုင်ဆုံးစစ်ဆေးပြီး တိကျအောင် လုပ်ရပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်အပေါ် အပြင်းအထန် အငြင်းပွား တာမျိုးလည်း ရှိတတ်ပါတယ်။ ဒီအခါမှာ မဲတွေကို ပြန်ရေတွက်တာရှိသလို နောက်တကြိမ် မဲပြန်ပေးရတာလည်း ရှိပါတယ်။ နောက် တကြိမ် မဲပြန်ပေးတဲ့ပုံစံတွေက အမျိုးမျိုးရှိနိုင်ပါတယ်။
လစ်လပ်နေတဲ့ မဲဆန္ဒနယ်မြေအတွက် ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပတဲ့ အမျိုးအစားဟာ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ရွေးချယ် တင်မြှောက်ခံထားရသူက သေဆုံးသွားရင် (ဒါမှမဟုတ်) အလုပ်ထွက်သွားရင် (ဒါမှမဟုတ်) ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေနဲ့ ငြိစွန်းလို့ နှုတ်ထွက်ပေးရရင် အဲဒီလူရဲ့ရာထူးက လစ်လပ်နေမှာ ဖြစ်လို့ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲကို မဖြစ်မနေ ကျင်းပရတာပါဘဲ။ စီစဉ်နေကျ ပုံစံမျိုး မဟုတ်တဲ့အပြင် ပုံမှန်ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပချိန်မဟုတ်ပဲ လုပ်ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရွေးကောက်ပွဲမှာ မဲမပေးပဲ နေလို့ရ-မရ ဆိုတဲ့ကိစ္စဟာ နိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့ ဆက်စပ်နေလို့ အပိုင်း(၁၆) နိုင်ငံရေးပါတီတွေရဲ့ အခန်း ကဏ္ဍရောက်မှ ပြောပါတော့မယ်။ နိုင်ငံတချို့မှာ နိုင်ငံသားတွေဟာ မဲပေးဖို့ ပျက်ကွက်ရင် နောက်တကြိမ် မဲပေးခွင့် ဆုံးရှုံးတတ် တာမျိုး ရှိပါတယ်။
လိုလားချက်တခုခုကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ဖို့ကိစ္စမှာ စောဒကတက်စရာ နမူနာတခုကို ပြောပါမယ်။ ရွေးချယ် တင်မြှောက် ခံရသူတွေကို ပိုပြီးတရားဝင်ဖြစ်အောင် နိုင်ငံတွေက အတတ်နိုင်ဆုံး ကြိးပမ်းကြပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ လူထုဆန္ဒကို ဖြည့်ဆည်းပေးတယ် ဆိုတဲ့ သမိုင်းမှတ်တမ်းကောင်းကို လိုချင်လို့ပါဘဲ။ ဒါပေမယ့် လူထုက မဖြစ်မနေ မဲပေးရမယ် ဆိုတာကတော့ အာဏာရှင်ဆန်ပါတယ်။ မဲပေးတာဟာ နိုင်ငံသားတဦးအနေနဲ့ နိုင်ငံတာဝန် ထမ်းဆောင်ခွင့် ရတယ် ဆိုတဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်တခု ပါဘဲ။ ဒါပေမယ့် မဲပေးတယ်၊ မပေးဘူးလို့ ဆုံးဖြတ်တာဟာ အဲဒီနိုင်ငံသားရဲ့ လွတ်လပ်တဲ့ ဆန္ဒအတိုင်းဘဲ ဖြစ်သင့်ပါတယ်။
မူရင်း (အင်္ဂလိပ်ဘာသာ) © Roland O. Watson 2008
တအုပ်လုံး ဘာသာပြန်အတွက် download PDF – http://www.lessonsindemocracy.org/LessonsinDemocracyBurmese.pdf
Filed under လမ်းညွှန်စာအုပ် Tagged with Lwin Aung Soe
ကလေးမြို့ ဆုံးဖြတ်ချက် ကြေညာစာတမ်းနှင့် ပတ်သက်၍
၂ဝ၁ဝ ခုနှစ် အောက်တိုဘာ ၂၄ ရက်တွင် မြန်မာ တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်များ၊ နိုင်ငံရေးအင်အားစု ခေါင်းဆောင်များ၊ ဒီမိုကရေစီရရှိရေး လှုပ်ရှားသူများ လက်မှတ်ရေးထိုး ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည့် ကလေးမြို့ ဆုံးဖြတ်ချက် ကြေညာစာတမ်းပါ –
ဒီမိုကရေစီရေး၊ လူ့အခွင့်အရေး၊ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး တို့အတွက် ရည်မှန်းချက်၊
၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲအပေါ် သဘောထား၊
ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေးအတွက် ဦးတည်ကြိုးပမ်းမှု
1 National League for Democracy (Liberated Area – Japan Branch)
2 League for Democracy in Burma (LDB)
3 Burma Democratic Action (BDA)
4 Democratic Federation of Burma (DFB)
5 All Burma Federation of Student Unions (Foreign Affairs Committee) (ABFSU-FAC)
6 Democratic Party foraNew Society (DPNS-JPB)
7 Burma’s Refugees Serving Association (Japan)
8 Save Burma
9 Peaceful Burma
10 Federation of Workers’ Union of the Burmese Citizen (in Japan) (FWUBC)
11 Self-funding Committee International (SCI)
12 အလင်းအိမ် မဂ္ဂဇင်း
13 National Democratic Front (Burma) (NDF) Representative for Japan
14 Palaun National Society (PNS)
15 Arakan League for Democracy (Exile-Japan)
16 Chin National Community-Japan (CNC- Japan)
17 Hotel and Restaurant Worker’s Union of Burma (HRWUB)
18 Seafarers’ Union of Burma (SUB)
19 အဟာရ စာစောင်
20 Human Resource Development Program (HRDP)
21 Burma Campaign Japan (BCJP)
22 Karen National Union – Japan (KNU-Japan)
23 Kachin National Organization, Japan (KNO-Japan)
24 Karen National Community (KNC-Japan)
25 Karen National League (KNL-JP)
26 Punnyagari Mon National Society (PMNS)
27 Shan Nationalities for Democracy – Japan (SND-JP)
28 Kachin State National Congress for Democracy (Liberated Area-Japan) (KNCD)
29 FTUB Japan Representative
30 Shan State Nationalities for Democracy – Japan (SSND-JP)
Download PDF – Statement of EBC on Kalay Declaration